Mamwe mabhuku matanhatu nevanyori kubva kuReal Sitio uye Villa de Aranjuez. 6nd kuendesa | Zvazvino Zvinyorwa
Mwedzi wapfuura Parizvino kune vanyori vatanhatu yeguta rangu rekugara, Royal Site uye Villa de Aranjuez. Ndakanga ndaenda vamwe 6 kupedzisa gumi nemaviri e mazita ekutanga uye / kana masimba yeiyi yakanaka enclave kumaodzanyemba kweCommunity yeMadrid. Iwe unokokwa kuti ufambe kana kuwana yavo nyaya nekuda kwevanyori ava. Ngatione.
1 Aranjuez. Pakati peshamwari nekusavapo - Antonio Gallego Buendía
2 Bedouin muguta - Javier Sánchez-Almazán
3 Nguo yaTemplar - Lorenzo Arana Agudo
4 Mutengo werombo - Armando Santiago Jiménez
5 Mbeu yeAsh - Luis Moreno naJesús Valbuena
6 Hafu-Ropa Roto - Farramuntana
Aranjuez. Pakati peshamwari uye kusavapo - Antonio Gallego Buendía
Tinotanga ne nhetembo yemunyori uyu, akaberekerwa muSiles uye uyo akauya kuAranjuez muhudiki hwake. Iri bhuku rakakamurwa kuita zvikamu zvitatu: Ini Aranjuez nenharaunda dzayo, uko kurudziro yenhetembo kunobva kwake zvinokuvaraidza, yako ystävät and the nyika iyo yakapoteredza. Wechipiri, Pakati peshamwari uye kusavapo, ine sevanopikisa iyo mhuri, shamwari dzakawanda nevamwe ndangariro. Uye pakupedzisira, Kune vazukuru vangu.
Bedouin muguta - Javier Sánchez-Almazán
Este muchengeti weInvertebrate Unganidzo yeNational Science Museum akatoburitsa bhuku renyaya: Mudhara, zizi nemukomana ane kiti nedzimwe nyaya muna 2013, uye ino inoverengeka muna 2016.
Inotiudza iyo nyaya ye Gabriel, jaya rinogara muMadrid, rinoshanda kuMuseum yeMasikirwo eSainzi uye imagines mabhuku ezviitiko neshamwari mbiri, Óscar naCurto. Gabriel ane hukama nemukadzi mukuru kupfuura iye anomumanikidza kuti vagare pamwechete. Saka anomboenda kuAranjuez, nasekuru vake Moncho.
Rimwe zuva, ndichifamba kuburikidza nejGardens yeRoyal Site, Gabriel anoitika kukanda meseji mukati mehombodo kumvura yeTagus. Meseji iyoyo inosvika kune anogamuchira, munguva pfupi shanduko huru muhupenyu hwaGabriel izvo zvinoreva zvakare kusangana kutsva.
Mucheka waTemplar - Lorenzo Arana Agudo
Arana Agudo anobva Cuenca uye ikoko akadzidza Teaching, asi ave Makumi matatu emakore muAranjuez.
Yakaburitsa vana mabhuku. Iwo maviri ekutanga enhetembo: Kunzwa uye kufunga e Maroja ehupenyu. Chechitatu, Dzidziso dzisinganzwisisikeIyo yakaumbwa nengano gumi dzakanyorwa mune dzerudo dzakagadzwa muCuenca. Chechina, Kushumira Mwari newe, yakaiswa mumakumi matanhatu, iri muprose uye ine toni yetsika.
Mukupedzisira isu tiri Toledo, iko a rudo uye kusuwa kwemoyo nyaya yevakomana vaviri vane makumi matatu mune mamiriro ehupfumi hwazvino. Saka kuratidzwa kwezvematongerwo enyika neuzivi kunochinjwa nerudo.
Mutengo werombo - Armando Santiago Jiménez
Santiago Jiménez akaberekerwa muAranjuez muna 1964 uye inyanzvi yemagetsi. Zvebasa rake mu zvemagetsi tekinoroji, uye rudo rwake rwesainzi, akakurudzirwa kunyora bhuku iri.
Saka anotibvunza nezvake nei zvakanaka kana zvakaipa rombo rakanaka. Uye chii chingaitika kana imwe kambani ine hunyanzvi hwekushandisa tekinoroji nesainzi ikafunga maitiro ekuva nehutongi pamusoro peiyo njodzi? Iyo protagonist yenyaya iyi ichafanira kurwisa nyika ine simba nyanzvi mune algorithms uye vachidana icho chinhu chimwe chete, kutonga pasainzi, hunhu uye kunyangwe chitendero.
Mbeu dzemadota - Luis Moreno naJesús Valbuena
Luis Moreno es mudetembi uyewo munyori wenhau. Akaburitsa bhuku renhetembo Tsono Dzemvura uye enganonyorwa Tichashinga zvakare y Kushora dutu. Uye Jesu Valbuena ave makore gumi nemashanu akafanana mutori wenhau kumaodzanyemba kweCommunity yeMadrid, zvese muzvinyorwa zvakanyorwa nemumasangano kana pawairesi.
Izvi zvako rechipiri basa rekubatana. Vakazvipa muna Kukadzi apfuura uye iri bhuku na nhema nhema gara mune anodzvinyirira vechidiki centre. Rimwe zuva imwe yadzo inonyangarika mukati mamiriro asinganzwisisike nekuti hapana munhu anogona kutsakatika asina kusiya chero rudzi rwekuronda. Vashandi vaviri vanoedza kutsvaga kuti chii chaizvo chakaitika.
Mestizo kurota - Farramuntana
Iyi ndiyo rechipiri bhuku kubva kumakemikari Juan Carlos Rodriguez, anozivikanwa zviri nani saFramramuntana. Yekutanga yaive Riparian, yakanyorwa tandem naamai vake. Ndiyo saga yemhuri akatambanudza mazera mashanu umo mumwe hunhu akasarudzika, Sekuru Calores. Izvi, izvo zviriko, zvinoumbwa ne treinta ngano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Mamwe mabhuku matanhatu nevanyori kubva kuReal Sitio uye Villa de Aranjuez. 6nd kuendesa
Jose Angel Orgaz Torres akadaro
Chete chetatu chinoshaikwa. Kune vamwe vanyori, pakati pavo ini, avo nemagwaro avo vanopa kupa zvakati revo, kana zvichibvira, kuvanhu vedu vakasarudzika.
Pindura José Ángel Orgaz Torres
Mhoroi, José Ángel. Hongu, ichokwadi, kune zvimwe zvakawanda. Asi zvave nenguva yakareba kubvira pandakanyora chinyorwa ichi uye dzimwe nguva vanyori vanotipfuura. Ona kana ndichigona kuita chikamu chechitatu. Ndatenda nekutaura kwako.
Mabhuku ezhizha: Runyerekupe rweSurf, naYukio Mishima